Thu, Jun 4, 2020 at 9:15pm
अविरल वर्षाका कारण घरकाे पर्खाल भत्किँदा एकै परिवारको ३ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, २७ असार । लगातार वर्षाका कारण काठमाडौंको मुलपानीमा घरको पर्खाल भत्किँदा एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु भएकाे छ । शुक्रबारकाे अबिरल वर्षाले अर्काको घरको पर्खाल भत्किँदा एकै परिवारका तीनजनाको ज्यान गएको हाे । महानगरीय प्रहरी वृत वौद्धका डीएसपी नरेन्द्र चन्दका अनुसार मुलपानी बाबाचोकमा टहरामा बस्दै आएका एकै परिवारका तीनजनाको ज्यान गएको हो ।उनीहरु सबै एकै परिवारका भएको र मजदुरी गर्दै गुजारा गर्दै आएका थिए । चन्दका..
काठमाडाै उपत्यका पनि डुबानमा
काठमाडौं, २७ असार । तीनदिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिराे जानुका साथै डुबानमा परेका छन्। कतिपय स्थानमा सडक-राजमार्ग नै अवरूद्धहुँदा यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिन भएकाे छ । अविरल वर्षाले काठमाडौं समेत डुबानमा परेकाे छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थान, कलंकीको मैत्रीनगर र खसीबजार क्षेत्रका घरहरु डुबानमा परेका छन् । बाढीको कारण कलंकीमा रहेका मालपोत कार्यलय, ट्राफिक कार्यलय तथा प्रहरी कार्यलय पनि डुबानमा..
बागमती र बकैया नदीमा बाँध फुट्यो, राैतहट डुबानमा
रौतहट, २७ असार । तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाले नदीहरुमा बाढी आउँदा रौतहटको अधिकांश स्थान डुबानमा परेको छ । पूर्वमा रहेको बागमती नदीमा पानीको स्तर लगातार बढदै गएको छ भने पश्चिमी भेगस्थित लालबकैया नदीमा लगातारको बाढीले एकस्थानमा बाँध टुटेको छ । जिल्लाको अन्य आधादर्जन स्थानमा बाँधमा कटान जारी रहेको छ । बाढीको कारण कटहरिया नगरपालिका वडा ४ हर्षाहा गाँउभन्दा दक्षिण लालबकैया नदीको पुलको बीचमा झण्डै २० फिट बाँध..
मोटरसाइकलसहित बाढीले बगाउँदा एककाे मृत्यु
रौतहट, २७ असार । अविरल वर्षाको कारण पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्‍तर्गत चन्द्रपुर नगरपलिका-२ को लच्कामा बाढीले राजमार्ग अवरुद्ध भएकाे छ । राजमार्गमा सवारीसाधनको लाम लागेको छ भने हजारौं यात्रु आवतजावत गर्न नसकेर रोकिएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले यातायात अवरोध खुलाउने काम गरिरहेको छ । राजमार्ग नै अवरूद्ध हुँदा यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न सास्ति भएकाे छ । जिल्लाको लाल बकैया खोलाले मोटरसाइकल बगाउँदा एक व्यक्तिको..
अवतरणको क्रममा धावनमार्गबाट विमान चिप्लिएर घाँसे मैदानमा, दुई यात्रु घाइते
काठमाडौं, २७ असार । अवतरणको क्रममा यती एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा चिप्लिएको छ । नेपालगञ्जबाट यात्रु बोकेर काठमाडौं आएको साे विमान अवतरणको क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुगेकाे हाे । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार अवतरणका क्रममा विमान कोटेश्वरपट्टीको धावनमार्गमा चिप्लिएर घाँसे मैदान र धावनमार्गको आदि भागमा पुगेको छ । विमान चिप्लिएर दुर्घटना भएपछि विमानमा रहेका दुई जना यात्रु घाइते बनेका छन् । उनीहरुलाई तत्कालै..
देशभरका सबै जसो नदीको बहाव बढ्यो, कोशी ब्यारेजका २३ ढोका खोलिए
काठमाडौं, २७ असार । बिहीबारदेखि परेको पानीका कारण देशभरका सबै जसो खोलानालको बहाव खतराको सुचकमाथि पुगेको छ । अबिरल वर्षापछि आएको बाढीले प्रदेश १ मा दुईजना बगाएको छ । सप्तकोशीमा आज बिहानको पानीको वहाव १ लाख ७६ हजार ७ सय ४५ क्युसेक प्रतिसेकेन्ड रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । खतरा नहोस् भनेर सप्तकोशी ब्यारेजका २३ वटा ढोका खोलिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ..
घूस लिएको अभियोगमा सहायक निरीक्षकविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ, २६ असार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी चौकी झोक्राहा सुनसरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमबहादुर कटुवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । वन मन्त्रालयबाट पक्राउ पुर्जी आएको र त्यसलाई मिलाइदिने भन्दै कटुवालले विभिन्न बहाना बनाई एक सेवाग्राहीसँग रु सात हजार घूस लिएको आयोगले आरोप लगाएको छ । आरोपी प्रहरी सहायक निरीक्षक कटुवालविरुद्ध बिगो असुल गर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर..
कर्णाली दुर्घटना अपडेट : २२ दिनपछि उपाध्यक्षको शव भेटियो, ९ जना अझैँ बेपत्ता
कर्णाली, २५ असार । कर्णाली जिप दुर्घटनामा बेपत्ता भएकी हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिन्धु शाहीको शव भेटिएको छ। बेपत्ता भएकाे २२ दिनपछि बुधबार उपाध्यक्ष शाहीको शव भेटिएको हो। असार ३ गते कर्णाली नदीमा जीप खस्दा उनीसहित १० जना बेपत्ता भएका थिए। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकालले जीप दुर्घटनापछि कर्णालीमा बेपत्ता भएकी उपाध्यक्ष शाहीको शव फेला परेको जानकारी दिए। उपाध्यक्ष शाहीको शव भेटिए पनि अन्य..
नेपालगञ्ज, २५ असार २ दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा आएको बाढीले बेतहनी सडकखण्डको कजवे डुबाएको छ । सो गाउँपालिका–२ स्थित कजवे डुुुबाउँदा साइकल तथा मोटरसाइकल ओहोरदोहोर गर्नसमेत अप्ठ्यारो भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताउनुभयो । बाढीले धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहेका खेतसमेत डुबाएको छ भने धानको ब्याडमा पनि क्षति पु¥याएको छ । सोमबार र मङ्गलबार रातभरि परेको पानीले डुडुवामा बाढी आउँदा..
निर्दयी छाेरा ! लखेटी–लखेटी आफ्नै आमाको हत्या
वीरगञ्ज, २५ असार । वीरगन्जमा एक युवकले आफ्नै आमाकाे लखेटी-लखेटी हत्या गरेका छन् ।वीरगन्ज महानगरपालिका २४ रामगढवामा छोराले आफ्नै आमाको हत्या गरेका हुन् । ४० वर्षीया आमा शोभा देवीको उनका छोरा २० वर्षीय गुड्डु यादवले धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरे । सल्लाह नगरी भैंसी बेचिदिएको निहुँमा गुडडुले आमा शोभा देवीको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । भैंसी बेचेको विषयमा मङगलबार दिउँसो आमा छोराबीच विवाद भएको..
कालंगा गाड जलविद्युत् आयोजनामा तोडफोड, १५ करोड बराबरको क्षति
बझाङ, २५ असार । सुदुरपश्चिम प्रदेशको गौरवकै योजना मानिएको बझाङको बुंगल क्षेत्रमा रहेको कालंगा गाड जलविद्युत् आयोजनामा ताेडफाेड भएकाे छ । गत असार १६ गते हाइड्रोका जेसीबी चालक माधव बोहरालगायतले बुंगोल नगरपालिका–२ बस्तीकी २० वर्षीया ललिता धामीको सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले दोषीलाई कारबाहीको माग राखी हाइड्रोका फिल्ड कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन् । तोडफोडबाट झन्डै १५ करोड बराबरको क्षति..
सांसदका सुरक्षा गार्ड थिए भिडन्तमा मारिने राई
असार २५, काठमाडौं । भोजपुरमा प्रहरी र बिप्लवको भिडन्तमा मारिएका सञ्जिब राई नेकपा नेता एवं संघीय सांसद सुदन किराँतीका सुरक्षा गार्ड रहेको पाइएको छ । भोजपुरबाट निर्वाचित संघिय सांसद तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सुदन किरातीसँग लामो समय बसेका सञ्जिव मिलनसार र काम प्रति निष्ठावान थिए । लामोसमय सञ्जिव किरातीको सुरक्षामा खटिने गरेको भनाई छ । । उनका अनुसार भिडन्तमा मारिने प्रशान्त उपनाम भएका निरकुमार..
भोजपुरमा विप्लव समुह र प्रहरीबीच भिडन्त, दुईजनाको मृत्यु
असार २५, काठमाडौं । भोजपुरमा विप्लब समुह र प्रहरीबीच भएको भिडन्तमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।भोजपुर सदरमुकाममा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)समूह र प्रहरीबीच गोली हानाहान हुँदा दुई जनाको मृत्यु हो । मृत्यु हुनेमा प्रहरी जवान सन्जीव राई र एक विप्लव समूहका कार्यकर्ता निरकुमार राईको मृत्यु भएको हो । अर्का एक प्रहरी सोम भट्टराई घाइते भएका छन् । प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताको भिडन्तमा गोलीबाट प्रहरी..
पहिरोको जोखिममा सडक यात्रा
बागलुङ, २५ असार । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बागलुङ–बुर्तिवाङ सडकखण्ड अन्र्तगत बडिगाड गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाको सिमानास्थित पहिरो ग्रस्त क्षेत्र । तस्वीरःखेमराज गौतम रासस ..
पाल्पा, २४ असार पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–३, देउराली नजिकै जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–५ की ७० वर्षीया भूमादेवी बुढाथोकी रहेकी छिन । तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुढाथोकीको मृत्यु भएको हो । घाइते १४ जनाको तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । आज बुटबलबाट..
घूस लिएको आरोपमा सहायक वन अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ, २४ असार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय दाङका सहायक वन अधिकृत रामाज्ञाप्रसाद साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना दर्ता स्वीकृत गरिदिएबापत रु २० हजार घूस लिएको भन्ने आरोप लागेको छ । आयोग प्रवक्ता प्रदीपकुमार यादवका अनुसार आरोपी साहविरुद्ध बिगो असुल गरी कैद सजायको माग गरिएको..
विषादी परीक्षण नगरी तरकारी र फलफूल ल्याउनेविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन रिट
काठमाडौँ, २४ असार सर्वोच्च अदालतमा विदेशबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन रिट निवेदन दायर गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आज छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । सीमामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को यही असार १९ गतेको बैठकले विषादी..
प्रहरीले चिताबाटै उठायाे जलिरहेकाे शव
जनकपुर, २४ असार । धनुषामा छाेरीले आत्माहत्या गरेपछि प्रहरीलाई खबर नगरी जलाउन लागिएकाे शव उठाइएकाे छ। खबरै नगरी शव जलाउन खाेजेकाे थाहा पाएपछि प्रहरीले चिताबाटै शव उठाएर पोष्टमार्टमका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल ल्याएको हाे। धनुषाको सबैला नगरपालिका १ का शत्रुधन यादवकी १४ वर्षीया छोरी पिंकी यादवले सोमवार मध्यरातमा आत्माहत्या गरिन् । उनका परिवारले प्रहरीलाई खबर नगरी शव चलाउन खोजे। दागबत्ती दिइसकेपछि शव जल्न सुरु भएको..
विप्लव समूहले जलायाे वडा कार्यालय, प्रहरी निरीक्षक घाइते
बर्दिया, २४ असार । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले बर्दियाको एक वडा कार्यालयमा आगो लगाउकाे छ । विप्लव समूहले साेमबार राति बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–६ को वडा कार्यालयमा आगो लगाएको हाे । गएराति भएको आगजनीबाट वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको छ भने महत्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएका छन् । घटनास्थलमा विप्लव समूहको भेरी कर्णाली ब्युरोको पर्चा भेटिएको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका एसपी रमेश थापाले जानकारी दिए..
सिरिन्ज आक्रमणकारी शिक्षक भएकाे खुलासा, स्थानीयद्वारा प्रहरी कार्यालय घेराउ
काठमाडौं, २३ असार । काभ्रेमा साेमबार सिरिन्ज आक्रमणमा प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति शिक्षक भएकाे खुलासा भएकाे छ । युवतीमाथि सिरिन्ज हान्दै गर्दा स्याङ्गजा वालिङ्गका विज्ञान विषय पढाउने शिक्षक खगेन्द्र पाठकलाई प्रहरीले बनेपाको चारदोबाटोमा पक्राउ गरेको बताईएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिले सिरिन्ज आक्रमण गरेको नस्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। पाठक काभ्रे नमोबुद्ध नगरपालिका भकुन्डेका सरस्वती माध्यमिक विद्यालय शिक्षक हुन् । पाठकले सिरिन्ज हानेको भन्दै..
सिरिन्ज आक्रमणमा संलग्न एक पक्राउ, काभ्रे तनावग्रस्त
काभ्रे, २३ असार । सिरिन्ज आक्रमणले दिन प्रतिदिन विकराल रूप लिँदै गएकाे छ । साेमबार सिरिन्ज आक्रमणमा संलग्न रहेकाे आशंकामा प्रहरीले काभ्रेबाट एक जनालाई पक्राउ गरेकाे छ । भिडभाडमा सिरिन्जले घोचेको आरोप लगाउँदै काभ्रेको बनेपाबाट एक जनालाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिइ प्रहरीलाई बुझाएका हुन्। बनेपास्थित चार दोबाटो भन्ने स्थानबाट एक युवालाई स्थानीले समातेका हुन्। उनले नै सो कार्य गरेको होरहोइन भन्नेबारे खुलिनसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एसपी रमेश..
८ जघन्य अपराधका अभियुक्त ‘बादशाह’ १२ वर्षपछि सार्वजनिक, यस्ताे छ उनले गरेका अपराधकाे सुचि
काठमाडाैं, २२ असार । ८ जघन्य अपराधको मुद्दामा फरार रहेका कपिलवस्तुका अहमद खाँ (मुसलमान)उर्फ ‘जाबेद बादशाह’ पक्राउ परेका छन् । कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी ४ पिपराका ‘जाबेद बादशाह’लाई प्रहरिले नियन्त्रणमा लिएपछि कपिलवस्तु प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हाे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)द्वारा शनिबार बिहान काठमाडौँको सिनामंगलबाट नियन्त्रणमा लिईएका बादशाहलाई आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । अभियुक्त खाँको ७ वटा कर्तव्य ज्यान..
अवैध सम्बन्ध लुकाउन सासुमाथि चक्कु प्रहार
बीरगञ्ज, २२ असार । बीरगञ्जमा एकजना ३० वर्षीय महिलाले आफ्नो अवैध सम्बन्ध लुकाउन सासुमाथि चक्कु प्रहार गरेकी छिन् । इन्दुदेबी महराले आफ्नो अवैध सम्बन्ध खुल्ने भएपछि ५५ वर्षीय सासुको हत्या प्रयास गरेकी हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार कालिकामाई गाउँपलिकाकी ५५ वर्षीय राजपति देवी महरालाई शनिबार अपरचित ब्यक्तिहरुले चक्कु प्रहार गरेका थिए। उनको टाउकोमा चक्कु प्रहार भएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानमा उनलाई चक्कु प्रहार गर्ने घटनाकी मुख्य योजनाकार..
विद्यार्थी बाेकेकाे स्कुल बस नहरमा खस्याे, दुई शिक्षिका सहित विद्यार्थी घाइते
विराटनगर, २२ असार । मोरङमा विद्यार्थी बाेकेकाे स्कुल बस नहरमा खस्दा दुई शिक्षिका र १ विद्यार्थी घाइते भएका छन्। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका-३ स्थित गोकुवा चोकनजिकै नहरमा जेभियर्स बोर्डिङ स्कुलको बस आइतबार नहरमा खसेकाे हाे । दुर्घटनामा को १ ख १९८२ नम्बरको बसमा सवार दुई शिक्षिका र एक विद्यार्थी घाइते भएका छन्। उत्तरबाट दक्षिणतर्फ जाँदै गरेको बस विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकललाई साइड दिने क्रममा..
प्रहरीको कुटाईबाट पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष गम्भीर घाईते
काठमाडौं, २२ असार । नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाका अध्यक्ष होमकुमार कार्की प्रहरीको कुटाईबाट गम्भीर घाईते बनेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यरत दुई प्रहरीले सादा पोसाकमा आएर पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष कार्कीलाई कुटपिट गरेका हुन् । शनिवार राती सिन्धुलीको शिवनगरको एक होटलमा खाजा खाँदै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यरत काभ्रे खावा ६ घर भएका ३० वर्षीय प्रहरी हवल्दार..
देशभर मनसुन सक्रिय, पश्चिममा बाढी पहिरोको जोखिम
काठमाडौं, २२ असार । असारको तेस्रो साताबाट देशभर मनसुन सक्रिय भएकाे छ । विस्तारै मनसुनी न्यूननचापीय रेखा भारतबाट नेपालतर्फ सर्न थालेकाले देशभरको मौसम बदली भएर भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ । मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार शनिबारबाटै देशको धेरैजसो ठाउँमा पानी परेपनि आइतबारबाट सो क्रम अझ बढ्नेछ । विभागका अनुसार आइतबार दिउँसो मध्य र पश्चिमी क्षेत्रको पहाडी भू–भागमा..
भोटेकोसीमा शिवश्री हाइड्रो पावरका इन्जिनियरसहित २ वेपत्ता
सिन्धुपाल्चोक, २२ असार । अबिरल वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकास्थित शिवश्री हाइड्रो पावरमा कार्यरत दुई जना वेपत्ता भएका छन्। गाउँपालिकास्थित शिवश्री हाइड्रो पावरमा कार्यरत दुई जना वेपत्ता भएका छन्। घाइते दुई जनालाई उद्धार गरी उपचार गर्न काठमाडौं पठाइएको छ। भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ को बीचमा पर्ने मार्मिङ खोलामा बगेर साइट इन्चार्ज यादवप्रसाद काफ्ले र इलेक्ट्रिसियन रामअवतार चौधरी वेपत्ता..
सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका नसिम खान काठमाडौँबाट पक्राउ
काठमाडौँ, २१ असार शृङ्खलाबद्ध हत्या आरोपमा सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका कपिलवस्तुका नसिम खान मुसलमानलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को टोलीले आज काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट पक्राउ गरेको छ । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका–४ पिपरा घर भई अधिकांश समय भारतमा बस्दै आएका खान काठमाडौँमा आएको मौका छोपी प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको हो । उनी सिनामङ्गलस्थित एउटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट निस्किएर सडकमा हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्..
बालिकाको मृत्युपछि राजपुरको सुजङ अस्पतालमा तनाव
डोटी, २१ असार डोटीको दिपायल राजपुरमा रहेको सुजङ अस्पतालमा आज साँझ ६ महीने बालिकाको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव उत्पन्न भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक कमलापति पन्तले दिनुभएको जानकारीअनुसार जिल्लाको शिखर नगरपालिका–१ कपल्लेकी टीका ऐरको छ महीने छोरी राधिकाको मृत्यु भएको हो । केही दिन पहिले घरमा निमोनिया ज्वरोले थला परिकी निज बालिकालाई उपचारका लागि आज उक्त अस्पतालमा..
राजधानी काठमाडौं आसपासमा ४.६ रेक्टरको भूकम्प, केन्द्रबिन्दू भक्तपुर
काठमाडौं, २१ असार । लामो समयपछि फेरि काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महशुष भएको छ । पानि परिरहेको अवस्थामा गतिलैसँग महशुष हुने गरी भूकम्प गएपछि राजधानीबासी केहीबेर आत्तिएका थिए । भूकम्प गएसँगै आकाशबाट मुशलधारे पानी वर्षिएपछि स्थानीयहरुलाई खुल्ला आकाशतर्फ जाने मौका मिलेन । यद्यपी मुख्यगरी २ ठूला धक्का पश्चात भूकम्प रोक्किएपछि अवस्था अहिले सामान्य छ । भक्तपुरको दूधपाटी आसपास केन्द्रविन्दु भई भूकम्प गएको हो । अपरान्ह..
Results 1930: You are at page 25 of 65